Al Shabaab Oo 8 Askari Ku Dishay Dagaal Ka Dhacay Duleedka Magaalada Baydhabo.
Sunday November 12, 2017 - 09:57:13 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaan katirsan gobolka Bay ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya deegaanka Awdiinle ee kala qeybiya degmooyinka Baydhabo iyo Bardaale ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ku dhaxmareen maleeshiyaad katirsan maamulka Koonfur galbeed iyo ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa yimid kadib markii xoogaga Al Shabaab ay wadada ugaleen ciidamo Maandooriyaha Khaatka kasoo qaaday degmada Bardaale kunasii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Idaacadda islaamiga Alfurqaan oo soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa sheegtay in 8 askari oo katirsan ciidamada Koonfur galbeed Meydadkooda lagu arkay duleedka deegaanka Awdiillne oo shalay marti geliyay dagaal aad u xooggan.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in xoogaga Al Shabaab ay ciidamada lalaayay ka furteen hubkii ay wateen sidoo kale waxaa dagaalkii shalay lagu gubay 2 gaari oo ay wateen ciidamada Koonfur galbeed, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamo dhanka Baydhabo ka yimid ay xalay maqribkii Meydadka askarta ladilay ka daad gureeyeen duleedka Awdiinle.
Waa khasaarihii ugu xooganaa ee maamulka Shariif Sakiin kasoo gaara weerar ka dhaca gobolka Bay tan iyo markii uu qabsdoomay shirkii udhaxeeyay Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada.